Umthengisi kunye noMthengisi wesitya esinephepha | ICopak
Isitya sephepha, Ikwabizwa njenge-Eco enokuboliswa zii-Eco isingxobo sokutya, okwakhiwa isitya sephepha, Isitya sephepha lesaladi, yenzelwe imilo yokujikeleza kunye nezinto zephepha. Ezi zitya zilungele isuphu, isityu, ipasta, iisaladi, ukutya okuziinkozo okubilisiweyo kunye ne-ayisi khrim, amandongomane, iziqhamo ezomisiweyo kunye nezinye iimveliso. Umkhenkce onganyangekiyo kwaye ungakhubazeki. Ezi ziyalahlwaiphepha izitya Ungabamba ukutya okususela enyameni ukuya kwimifuno ukuya kwiisosi. Sibonelela ngezitya kwiisayizi ezahlukeneyo ukuphatha yonke into ukusuka kwizitya ezisecaleni ukuya kwi-entree esayizi ephezulu.
Sebenzisa Isitya sokutya Ukuxhathisa kwe-TEMP -20 ℃ - 120 ℃
Umbala Imhlophe kunye nekraft kunye nealuminium Ukusetyenziswa Banokubulawa Round Bowl
Umthamo Ubukhulu ezilishumi ezahlukeneyo Isiqinisekiso ISO9001, FDA, CE, FSC
Ilogo Ngentando efunekayo Isiqinisekiso Isiqinisekiso somgangatho
Igama lomxholo Isitya sephepha Uhlobo Round isitya ezilahlwayo
Ukusetyenziswa Indawo yokutyela ekhaya MOQ Amacandelo ama-50
Inombolo yomzekelo Isitya sephepha Uphawu Iibhotile ezinokutsha
Ilogo Ukufikelela kwimibala emithandathu Izibuko I-Ningbo, iShanghai
Isitya sephepha, Ikwabizwa njenge-Eco enokuboliswa zii-Eco isingxobo sokutya, okwakhiwa isitya sephepha, Isitya sephepha lesaladi, yenzelwe imilo yokujikeleza kunye nezinto zephepha. Ezi zitya zilungele isuphu, isityu, ipasta, iisaladi, ukutya okuziinkozo okubilisiweyo kunye ne-ayisi khrim, amandongomane, iziqhamo ezomisiweyo kunye nezinye iimveliso. Umkhenkce onganyangekiyo kwaye ungakhubazeki. Ezi ziyalahlwaiphepha izitya Ungabamba ukutya okususela enyameni ukuya kwimifuno ukuya kwiisosi. Sibonelela ngezitya kwiisayizi ezahlukeneyo ukuphatha yonke into ukusuka kwizitya ezisecaleni ukuya kwii-entree ezinobungakanani obukhulu.
ICOPAK inokubonelela ngobungakanani obahlukeneyo be izitya zamaphepha kunye nombala weKraft, umbala omhlophe okanye imibala yealuminium. Unokwenza izitya zakho ngokobungakanani obahlukileyo, uyilo, umthamo okanye ushicilelo lwe logo. Izikhongozeli zokutya ezinophawu olwahlukileyo okanye enye uyilo yindlela elungileyo yokubhengeza iimveliso zakho.
Umgangatho weplastiki yokulahla izitya zenziwe nge-100% ye-Eco-friendly kunye nephepha lokwakheka kwendalo. Olu lukhetho olulungileyo lokukhusela umhlaba.
ubungqina bokuvuza kunye nokunganyangeki kwebala. Sinikezela ezineziciko ezifanelekileyo kuzo zonke iintlobo zeizitya zamaphephaUkudityaniswa kwesikhongozeli kunye nesiciko sisisombululo esigqibeleleyo sokupakisha. Uyilo olunganyangekiyo lokuvuza luqinisekisa ukutya okutsha.
Nokuba iindwendwe zakho zijonge ukutya ukutya kwazo xa zihamba okanye zibukele umboniso owuthandayo, uyilo olukhethekileyo kwezi iphepha izitya Qiniseka ukwanelisa wonke umthengi.
Egqithileyo Indawo yesitya sephepha
Okulandelayo: Isitya sephepha ezineziciko
Iikomityi zepla zeplastiki ezishicilelweyo